Ọchịchị Steeti Anambra Akpọkuo Ndị Na-Ewunye Ihe Ka Ha Na-Anata Ikike Tupuu Wunyebe
Ọchịchị steeti Anambra adụọla ndị dị iche iche na-ewunye ihe na steeti ahụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha natara ikike tupuu wunyebe ma ọ bụ rụnyebe ihe ọbụla ha na-arụnye.
Onyeisi ụlọ ọrụ 'Awka Capital Territory Development Authority', (ACTDA) bụ maazị Amaechi Okwuosa na ogbo ya nke ụlọ ọrụ 'Anambra State Physical Planning Board', bụ maazị Victor Okpoko nyere ọkpụkpọ oku a, dịka ụlọ ọrụ abụọ a site na njikọ aka ndị ọrụ uwe ojii kụturu otu ọdụ mmanụ ụgbọala n'Amawbịa n'akụkụ okporo ụzọ ochie ahụ si Awka wee gaba Ọnịtsha.
N'okwu ya gbasaara ịkụtù ọdụ mmanụ ahụ, maazị Okwuosa kọwara ya dịka nke ziri ezi na nke dị oke mkpa, iji wee rụnye ọkụ ije awele n'okporo ụzọ ahụ iji hụ na ụgbọala na ụmụ mmadụ na-agara onwe ha siriri werere n'ebe ahụ ma sikwa n'ụzọ dị otu ahụ belata ihe mberede okporo ụzọ. O mere ka a mara na ọchịchị gọvanọ Willie Obianọ jiri ndụ na akụnụba ụmụ mmadụ wee kpọrọ ihe nke ukwu, nke mere na ọ ga-ewezuga ihe ọbụla pụrụ iweta ajọ ọnọdụ nye ọnọdụ ụmụ mmadụ na steeti ahụ. Ọ kpọkuzịkwara onye ọbụla ga-ewunye ihe na steeti ahụ ka ọ gbaa mbọ nata ikike na nkwàdo gọọmenti tupu ọ malite ihe ọbụla.
N'okwu nke ya, maazị Victor Okpoko nke ụlọ ọrụ 'Anambra State Physical Planning Board' kwuru na ya bụ nwa amadi nwe ọdụ mmanụ ahụ anataghị ikike na nkwado gọọmenti tupu wunyebe ya bụ ihe, ma kọwaa na e nyere ya ohere ka o wee kwagharịa ma nyekwa ya ala ebe ọ ga-arụnye ụlọ ọrụ ya, iji wee belatara ya mmefù ego.
Otu ọ dị, ya bụ nwa amadị a kụturu ụlọ ahịa ya kwuru na a maara ya ọkwa n'ezie ma nyekwa ya ohèrè ka o wee bugharịa ọdụ ahịa ya ahụ, ọ kachasị n'ihi ihe iche aka mgba na ihe izè ndụ dị iche iche ọ na-ewetara ụmụ mmadụ na mpaghara ebe ahụ, bụkwa ebe mmadụ na-ekwu mịmịmị oge ọbụla.